12 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay duleedka Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomalia12 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay duleedka Muqdisho
June 2, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
12 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay duleedka Muqdisho. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 12 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ay ku dileen duqeyn.
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan ku sheegay in duqeyntu ay Khamiistii ka dhacday meel 30 mayl koonfur-galbeed ka xigta Muqdisho.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in wax shacab ah aysan dhib kasoo gaarin duqeynta.
Mareykanka ayaa ugu yaraan 15 weerar oo duqeyn ah oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka geystay gudaha Soomaaliya sanadkan.
May 21, 2018 Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya oo beeniyay in ay jiraan wada-xaajood u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ku saabsan muranka badda